DF Somaliya oo war ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland, go’aan aan la fileyna ka qaadatay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DF Somaliya oo war ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland, go’aan aan...
DF Somaliya oo war ka soo saartay doorashada maamulka Jubbaland, go’aan aan la fileyna ka qaadatay!
Muqdisho (Halqaran.com) – War-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada arrimaha gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in aysan dowladdu aqoonsan doonin natiijo walbo oo ka soo baxda doorashada maamulka Jubbaland.
Wasaaradda ayaa xusay in doorashadda magaalada Kismaayo ka socota ay baal marsan tahay dastuurka iyo habraaca Doorashada ee soo saartay Wasaarrada arrimaha gudaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Hoos ka akhriso war-saxaafadeedka Dowladda Soomaaliya:
ma aqoonsanna doorashada